Dowladda Eretariya beenisay eedeymo ku saabsan in militarigooda ka dagaallamaya gobolka Tigray ay xasuuqeen shacab | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowladda Eretariya beenisay eedeymo ku saabsan in militarigooda ka dagaallamaya gobolka Tigray...
Dowladda Eretariya ayaa “sidii caadada u ahayd u beenisay” eedeymo ku saabsan in militarigeeda ka dagaallamaya gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ay dileen boqollaal qof oo ku sugnaa magaalada Aksum, labo maalmood oo ka tirsanaa bishii November gudahood.
Warbixin ay soo saartay hayadda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in dil wadareedka la fuliyay 28-kii iyo 29-kii bishii November uu noqon karo fal dambiyeed ka dhan ah bani’aadannimada.
Hase yeeshee, Wasiirka Warfaafinta ee Ereratiya, Yemane G Meskel, ayaa eedeyntaas ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn.
“Warbixinta waxay inteeda badan ku saleysan tahay markhaatiga ay bixiyeen 31 qof oo ku sugan xerada qaxootiga Hamdayet ee gudaha Suudaan,” ayuu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka.
Mr Meskel ayaa sheegay in la ogyahay in xeradaas dadka ku jira intooda badan ay yihiin dagaalyahannadii daacadda u ahaa xisbiga TPLF ee cararay kaddib markii lagu eedeeyay in ay “xaquuq ba’an ka geysteen” magaalada Mai-Kadra, xilligii ugu horreeyay ee uu dagaalka qarxay.
Amnesty ayaa sheegtay in warbixinteeda ku saabsan xasuuqa Aksum ay ka diyaarisay wareysiyo ay la yeelatay qaxootiga gobolka Tigray ka tagay ee ku sugan Suudaan, sidoo kalena ay khadka telefoonka ku wareysatay dad badan oo ku sugan magaalada, goob joogna ka ahaa dhacdooyinka.
Hayaddan u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawirro qalabka satellite-ka lagu qaaday oo muujinaya caddeymo ku saabsan qabuuro cusub.
41-ka ruux ee ka badbaaday xasuuqa iyo goob joogeyaal ayaa bixiyay magacyada 200 oo ruux oo ay yaqaanneen oo lagu dilay magaalada Aksum.
BBC-da ayaa sidoo kale la hadashay markhaatiyaal ku sugan gudaha magaalada Aksum, kuwaasoo bixiyay xog la mid ah tan ay bixiyeen dadka ay la hadashay hayadda Amnesty.
Qof ka tirsan shaqaalaha dowladda ee howlaha rayidka ayaa sheegay in meydadka wiilal yar yar iyo rag ay toogasho ku dileen ciidanka Eretariya aan in muddo ah la aasin, ayna waddooyinka iska daadsanaayeen maalmo, qaar badan oo ka mid ahana ay waraabeyaal cuneen.
Wuxuu tirada dhimashada ku qiyaasay in ay gaadhi karto ilaa 800 oo ruux, tiradaas oo mid la mid ah uu sidoo kale bixiyay baadari wareysi siiyay Wakaaladda Wararka ee AP. Baadarigaas ayaa warbaahinta tusayay kaararka aqoonsiga ee dadkaas iyo qabriyada lagu aasay meydadkooda.
Dowladaha Itoobiya iyo Eretariya labaduba way beeniyeen in militariga Eretariya ay ku lug lahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray.
Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in warbixinta Amnesty ay mudan tahay “in si dhab ah loo qaato”, iyagoo intaasna ku daray in ay baadhitaan ku wadaan eedeymaha.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa horaantii bishii November amar ku bixiyay in dagaal lagu qaado gobolka Tigray oo ay maamulkiisa gacanta ku hayeen xisbiga TPLF, kaddib markii xoogaggooda ay qabsadeen saldhig ay gobolkaas ku lahaayeen militariga federaalka.
30-kii bishii November ayuu baarlamaanka u sheegay in “aan hal qof oo shacab ah la dilin” intii uu howlgalkaas socday.
Previous articleRooble oo caawa kulan kula qaatay Hotelka Jaziira, Musharixiinta, Bulshada Rayidka iyo Jeneraal indha cade..
Next articleTaliyaha Ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Xijaar oo aad uga Caroday falkii lagu bur buriyay Iskuulka Hooyga Xamar
Turkiga oo ka hadley arin Xasaasi ah oo ku saabsan Ciidamada...
Xukuumadda Turkiga ayaa iska fogeysay in ay mas'uul ka tahay falalka lagu eedeeyay ciidamada ay u tababartay dowladda Federaalka ee Soomaaliya, kadib cabasho ay...
Gabadhii Amiirad Amiirad Latifa Dubai ee la weysanaa oo...
Gudoomiyaha Aqalka sare oo taageeray mooqifka ah in shirka lagu...
Axmed Madoobe oo ku baaqay in Farmaajo laga tashto, kuna...